Registry ဆိုတာ ... - keywords HERE
Home » registry » Registry ဆိုတာ ...
Registry ဆိုတာ ...
ကျနော် ဘာမှ မရေးဖြစ်တာကြာသွားတယ်ဗျာ။ ဘိုင်ပျတ်နေတာနဲ့ စိတ်ညစ်လို့ ဟီဟိ ။ အားလုံးက စာဖတ်ပျင်းကြတယ်။ ကျနော်လည်း တော်တော်ကို ပျင်းတာ။ ကွန်ပြူတာအကြောင်း စကားပြောကြရအောင်ဗျာ(စိတ်ညစ်တယ်ဗျာ မြန်မာစာရေးရတာ၊ြ- နဲ့ ပြူတာနဲ့ -ျ နဲ့ပျူတာနဲ့ ရှုပ်နေတာပဲ။ ဘယ်ဟာမှန်လဲ မသိလို့ ၂ ခုလုံးနဲ့ ရေးတယ်ဗျာ)။ စာဖတ်သလို မဟုတ်ရင် နည်းနည်း ပိုဖတ်လို့ကောင်းမလားလို့ပါ။ ပြီးတော့ ကျနော်ရေးထားသမျှကို ၀င်ရောက်ပြောဆို ဝေဖန်စေချင်တာလည်း ပါပါတယ်။ comment လေးတွေနဲ့ ဝေဖန်ပေးပါ .. စကားပြန်ပြောကြပါနော် ..။ အခု Registry အကြောင်းနည်းနည်းလေး ပြောမလို့။ ဘာလဲ ဆိုတာလေး ပြောမလို့ ။ သိပြီးသားဆိုလည်း မသိသေးဘူးလို့ သဘောထားပါဗျာ.. နော် ။
Registry ဆိုတာ ဘာလဲ .. ? (Run မှာ regedit လို့ ရိုက်ထည့်လိုက် ပေါ်လာတဲ့ ကောင်က registry ပေါ့ .. ဟီဟိ) . ဘာလုပ်ပေးသလဲ ဆိုတော့ ... ကွန်ပျူတာမှ ရှိတဲ့ နေရာမှန်သမျှကို သိမ်းဆည်းပေးထားတာ ဒီကောင်ပေါ့ ။
ကွန်ပျူတာမှာ ရှိတဲ့ Hardware တိုင်းရဲ့ Information တွေ၊ Network Information တွေ၊ User တွေရဲ့ wallpaper, Screen Saver စတာတွေက အစ registry မှာ သိမ်းထားပါတယ်။ Registry တွေကို သိမ်းထားတာက Windows 98/Me မှာဆိုရင် System.dat နဲ့ User.dat ဆိုတဲ့ Binary နှစ် File ဖြစ်ပြီး၊ Windows NT/2000/XP မှာဆိုရင်တော့ များပြားလှတဲ့ Registry တွေကို Hives လို့ခေါ် ပြီး \_Windows\_System32\_Config Folder မှာသိမ်းထားပါတယ်။ Registry တွေမြင်ချင်တယ်၊ ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် Start မှာ Run ကို ရှာပြီး regedit လို့ ရေးပြီး OK ပေး ။ Registry Editor ပေါ်လာပါတယ်။ Registry ကို Editor နဲ့ပဲပြင်လို့ရပါတယ်။ Win.ini တို့ System.ini တို့လို Notepad, Text Editor တို့နဲ့ပြင်လို့ မရပါဘူး။ Registry ဟာ ကွန်ပျူတာရဲ့အကြောင်းအရာတွေ Setting တွေကို Regedit.exe သုံးပြီး Windows Registry ကို တိုက်ရိုက် ၀င် Setting လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Registry မှာ အဓိကအုပ်စု(၆)စု ရှိပါတယ်။
သူက window 9x ကအသုံးပြုတဲ့ Standard Class Objects တွေကို သတ်မှတ်ပေးတာပါ။ Class Object ဆိုတာ မျိုးတူ Function အုပ်စုတွေရဲ့နာမည်ပါပဲ ။
ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးထဲမှာ အသုံးပြုသူတွေဟာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ User Perference(wallpaper,screen saver,etc.) နဲ့ တစ်ယောက်ချင်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ User တစ်ယောက်ချင်းစီက သတ်မှတ်ထားတဲ့ Perference တွေကို HKEY-CURRENT-USER ထဲမှာ သိမ်းထားပြီး လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ User ရဲ့ Personalized Setting တွေကို ဒီမှာ သိမ်းပါတယ်။
သူက ခုနက User Setting တွေနဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ System ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို သိမ်းထားပါတယ်။ သူက ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတိုင်းရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို၊ တပ်လိုက်သမျှ၊ ဖြုတ်လိုက်သမျှ ကို သိမ်းထားပါတယ်။
အကယ်၍များ အကြောင်းအရာနှစ်ခု Setting ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ အကြောင်းအရာကို သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ခင်ဗျားကွန်ပျူတာမှာ မတူတဲ့ Monitor နှစ်လုံးတပ်ထားတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အခုလက်ရှိ သုံးနေတာက နှစ်လုံးထဲက တစ်လုံး၊ ဒီကောင်က အခုလက်ရှိ သုံးနေတဲ့ Monitor နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Values တွေကို သိမ်းထားပါတယ်။
သူကတော့ ကွန်ပျူတာ အလုပ်မြန်မြန် လုပ်နိုင်ဖို့ System Configuration တွေကို RAM ပေါ်တင်ပြီး အလုပ်လုပ်ပါတော့တယ်။ သူဟာ Boot လုပ်တိုင်း System Configuration တွေပြောင်းလဲတိုင်း Update လုပ်ပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ ။Regedit ရယ် Regedit 32 ရယ်ဆိုပြီး Windows 2000 နဲ့ XP မှာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Regedition သုံးနေကျလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ရှာဖွေပေးတဲ့ နေရာမှာလည်း Regedit 32.exe ထက်မြန်ဆန်တာကြောင့် Regedit ကိုပဲ အသုံးများတာပါ။ Windows XP မှာ HKEY-DYN-DATA ကိုတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ Idea ကတော့ တူတူပါပဲ။
(ဆရာဇော်လင်းရဲ့ A+ စာအုပ်မှ ပြန်လည် မျှဝေပါသည်)